[Akhriso] Puntland oo 8 shuruudo adag ku xirtay ka soo qeyb galka Shirka Doorashooyinka - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararka Puntland oo 8 shuruudo adag ku xirtay ka soo qeyb galka...
[Akhriso] Puntland oo 8 shuruudo adag ku xirtay ka soo qeyb galka Shirka Doorashooyinka
Maamulka Puntland ayaa shuruudo adag ku xiray in dib loo furo wadahadalka Doorashooyibnka si loo sii anba qaado heshiiskii 17 Sebtember 2020, waxayna sheegeen in aay doonayaan in dib u eegis lagu sameeyo dhacdooyin badan oo dhacay kaddib saxiixa heshiiskii 17 Sebtember 2020.
Qoraalka oo ku qornaa afka Ingiriiska ayaa lagu sheegay. “Marka la eego horumarkii siyaasadeed ee dhowaanahan ka dhacay Soomaaliya iyo doorashooyinka qaran ee hadda socda, Puntland waxay cadeyneysaa ballanqaadkeeda ah inay sii wado xallinta xal ku saleysan is afgarad ballaaran oo ku saabsan arrimaha la isku hayo iyo dib u heshiisiinta khilaafaadka jira.
Waxaan cadeeyneynaa in la sii wado heshiiskii doorashada ee 17 Sebtember. Sidaa darteed, waxaan dooneynaa in ay dib u eegis lagu sameeyo caqabadaha waaweyn ee hortaagan bilowga doorasho qaran oo loo dhan yahay oo hufan.”
Dowladda Puntland ayaa waxay soo bandhigtay mowqifkeeda saxda ah ee ku aadan mar-xaladda ay waqti xaadirkan ku sugan tahay Soomaaliya iyo is-mari-waaga aan wali la xalin ee ka taagan qabsoomida doorashooyinka heer federaal ee loo balansanaa 2020-21.
War-saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyadda Puntland oo lagu xusay in madaxwayne Deni uu “si hagar la’aan ah” uga shaqeeyay heshiiska 17-kii September ayaa lagu soo bandhigay sideed qodob oo ay sheegtey in muhiim tahay in la wajaho kahor wadahadal kale.
Sideedaas qodob ayaa waxay kala yihiin;
1 – Si loo xaliyo qalalaasaha dastuuriga ah, madaxwayne Farmaajo waa in uu saxiixo digreeto uu hoos ugu dhigayo awoodaha xukuumadda, madaxtooyadda iyo baarlamaanka isla markaana uu bururiyo sharciyadii iyo qaraaradii ay xukuumadda iyo baarlamaanka meelmariyeen wixii ka dambeeyay 27-dii December, 2020 iyo 8-dii Febraayo, 2021.
2 – Kadib shaqaaqada 19-kii Febraayo, 2020 iyo doorka ay ciidamadda ku yeesheen, waa in la eryo taliyeyaasha ciidamadda milatariga, booliska iyo agaasimaha Hay’adda Sirdoonka NISA laguna bedelo hogaan lagu kalsoonaan karo si ku meelgaar ah inta lagu guda jiro geedi-socodka wadatashiga. Si loo xaqiijiyo ahmiyadda dhexdhexaadnimada geedi-socodka una soo laabato kalsoonida saamileyda, ciidamadda ammaanka waa in ay ka fogaadaan ku lug-yeelashadda arrimaha geedi-socodka siyaasadeed.
3 – Iyadda oo la tixgelinayo in dowladda federaalka ay ku fashilantay in ay dhaqan-geliso heshiisyadii hore, Saaxiibada Caalamka ee Soomaaliya waa in ay xoojiyaan doorkooda damaanad-qaad ee fulinta geedi-socodka lagu heshiiyo.
4 – Waa muhiim in Golaha Wadatasiga Qaranka uu ku shaqeeyo qorsheysan jadwaleysan oo lagu dhaqan-gelinayo geedi-socodka doorashooyinka qaranka.
5 – In la sameeyo guddi xaqiiqo raadin ah oo baaritaan ku sameeya dhacdooyinka 19-kii Febraayo una kormeero dhaqan-gelinta geedi-socodka doorashooyinka heer qaran.
6 – Si loo xoojiyo kalsoonida dhamaan dhinacyadda iyo daahfurnaanta geedi-socodka, waa in dhamaan daneeyeyaasha iyo ururadda bulshadda loo oglaadaa in ay kawada qeybgalaan geedi-socodka doorashooyinka
7 – Horumarinta xorriyadda hadalka, xorriyadda isu-imaatinka iyo xuquuqda mudaaharaadka waxay laf-dhabar u yihiin dimuqraadiyadda. Maba’da waa lagu saleeyaa shaxda siyaasadda qaranka isla markaana si wax ku ool ah loogu damaanad-qaadaa geedi u socodka doorashooyinka
8 – Dhamaan shirarka heerka qaran ee mustaqbalka waa in ay ku qabsoomaan goob ammaan ah oo Muqdisho dhexdeeda ah.
Shaacinta shuruudaha Puntland ayaa kusoo hagaagay saacado kadib markii wafdi ka socda Beesha Caalamka uuna horkacayo ergayga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayna wehliyaan dajireyaal kale ay Deni maanta kula kulmaan Garowe kalana hadleen xaalada cakiran.